Blocks: ny smartwatch Android modular dia efa zava-misy | Androidsis
Ny anarana hoe Blocks dia mety ho efa mahazatra an'ny iray hafa. Tetikasa teraka teraka telo taona lasa izay Kickstarter ary azo antoka fa hevitra nampanantena izany. Satria ny tanjon'ity tetikasa ity dia ny hanolotra anay a smartwatch modular. Midika izany fa azo ampidirina ireo rohy izay niasa ho toy ny tadiny ary niaraka tamin'izay nanampy anjara asa vaovao. Tsy isalasalana fa hevitra tena mahaliana,
Saingy hatramin'ny fanambarana kely dia kely, raha tsy hilaza afa-tsy izay dia fantatra momba ny Blocks. Na dia, io smartwatch io izao dia manomboka miverina ary efa amidy. Nihevitra ireo mpamorona azy fa tara kokoa noho ny tsy misy izany ary efa azon'ny mpanjifa ity famantaranandro modular amin'ny Android ity.
Tsy nisy nazavaina ny antony mahatonga io fahatarana io amin'ny fanombohany. Saingy, farafaharatsiny, ny Block dia efa zava-misy ary azo vidiana izao. Na dia nisy vokany aza io fahatarana tamin'ny fanombohany io. Satria misy pitsipitsony izay lasa somary lany andro izy ireo. Saingy, toa manolotra fampisehoana tsara ny famantaranandro. Ary koa, mahagaga fa tsy manana Android Wear izy io. Satria hampiasa kinova manokana an'ny Lollipop ianao.
Amin'ny ankapobeny, Ny sakana dia mamela antsika hanao asa mitovy amin'ny smartwatch hafa. Azontsika atao ny mamaky ny fampandrenesana momba ny finday avo lenta, manara-maso ny hetsika ara-batana ataontsika, mifehy azy amin'ny baikon'ny feo ... Ny mahazatra. Tsy misy mahagaga amin'izany.
1 Famaritana sakana
Ity famantaranandro ity dia misy a Dingana boribory 1,35-inch miaraka amina vahaolana 36 × 360 teboka. Ka noho izany dia nahavita nijanona ny famantaranandro. Ao anatiny no ahitantsika a Snapdragon 400 processeur. Ka tokony hanana fahefana ampy hihazakazahana tsara izy io ary hanatanteraka fampisehoana tsara. Inona koa, manana bateria 400 mAh. Ampy hanomezana azy ny fizakan-tena.
Araka ny efa nolazainay taminao, isaky ny rohy na modely izay ampiana, fampidirana vaovao no ampidirina amin'ity sakana ity. Teknolojia izay novolavolain'ny ekipa tenany izy, noho izany azo antoka fa lafiny iray tena mahaliana. Zavatra izay manampy ny Blocks hiavaka amin'ireo modely hafa eny an-tsena. Ireto sensors manaraka ireto dia misy ao amin'ny fivarotana orinasa izao:
Module bateria: Manampy 95 mAh fanampiny amin'ny batterie 400 mAh an'ny famantaranandro
Sensors momba ny tontolo iainana: Manampy antsika handrefy ny mari-pana, ny hamandoana ary ny tsindry amin'ny atmosfera
Module LED: Manampia jiro jiro LED amin'ny finday ahafahantsika mahita amin'ny alina. Ary koa, azo amboarina hiasa miaraka amin'ny fampandrenesana an-telefaona.
Bokotra maranitra: Izy io dia sensor sensor izay azontsika atao fandaharana handefa fampiharana na baiko amin'ny finday eo noho eo.
Pensation sensor: Fahafahana mahita ny hafaingan'ny fiasan'ny fontsika
GPS sy GLONASS: Ka tsy mila mampiasa finday isika. Mitovy ny fandidiana.
Ny vidin'ny Blocks tsy misy fanampiana dia $ 259. Mazava ho azy, ny modely fanampiny izay tianay ampiana dia misy vidiny. Vidiny amin'ny $ 35 izy rehetra, na inona na inona safidinao. Ka tsy maintsy ampiana amin'ny vidiny fiambenana io. ENY Vidio ny Blocks ary ireo modely enina feno dia tsy maintsy mandoa vola mitentina 469 dolara. Vidiny somary avo lenta, saingy mety hahaliana ny mpampiasa sasany ny mahazo io famantaranandro io.
Tsy misy isalasalana fa tetikasa manokana io. Satria famantaranandro tsy mahazatra amin'ny lafiny maro izy io. Misy lafiny maro amin'ny Blocks izay misarika ny saina. Satria nisafidy ny Android novaina izy ireo dia mampiasa kinova manokana an'ny Lollipop fa tsy Android Wear. Zavatra manavaka azy amin'ny famantaranandro hafa eny an-tsena. Ny famolavolana dia tratra tsara, satria manana fanatanjahan-tena tsara. Ka io dia smartwatch mety hahagaga. Afaka mahazo fampahalalana bebe kokoa ianao ary miroso amin'ny fividiananao ao amin'ny tranokalan'ny orinasa. Ahoana ny hevitrao momba ny Blocks?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Blocks: ny smartwatch modular miaraka amin'ny Android efa amidy
Ny Huawei Honor 9 Lite dia havoaka tsy ho ela ao India